Nhau - 2021 Arcair Innovative Cooker hood yakahwina Red Dot Dhizaini Mubairo: Chigadzirwa Dhizaini 2021
Qualification & Kubwinya
2021 Arcair Innovative Cooker hood yakahwina Red Dot Dhizaini Mubairo: Chigadzirwa Dhizaini 2021
Muna Kurume 2021, iyo yeGerman Red Dot Dhizaini Mubairo, inozivikanwa se "Oscar Mubairo" muindasitiri yekugadzira maindasitiri, yakaziviswa. Arcair 833 yaive pachinyorwa.
Mubairo weRed Dot Design, weGerman “IF Award” uye American “IDEA Award” unonzi mibairo mikuru mitatu yenyika. Mubairo weRed Dot Design nderimwe remakwikwi makuru uye ane simba pakati pemakwikwi epasi rose anozivikanwa ekugadzira.
Iyo "Red Dot" ndiyo mubairo wemhando yepamusoro yekugadzira. Vatongi vepasi rose vanongopa chisimbiso ichi chinotsvakwa chemhando kune zvigadzirwa zvine dhizaini yakatanhamara.
Dare revatongi rakachipa kune: Kwete-chinyakare Cooker Hood (08-05473-2021PD).
Kupihwa kwechigadzirwa chakanakisa ichi kuchagashira kucherechedzwa nenyika dzese.
Kukunda ndiko Kutanga
GUANGDONG ARCAIR APPLIANCE CO., LTD. kubudirira muRed Dot Mubairo: Chigadzirwa Dhizaini 2021
Hazvisati zvamboitika mumakore anopfuura makumi matanhatu enhoroondo yemakwikwi edu ekugadzira vakaita saizvozvo makambani mazhinji uye dhizaini masitudiyo akatarisana nehunyanzvi kutonga kwedu International jury segore rino. Zvigadzirwa kubva kumativi makumi matanhatu enyika zvakasvika kwatiri, uye yavo dhizaini yemhando uye dhigirii rekuvandudza zvakaongororwa mune imwe nzira inogara yakati wandei mazuva.
Naizvozvo, ndinonyanya kufara kukuzivisa iwe kuti chigadzirwa chako chakakwanisa kugonesa majurors edu uye anogamuchira mubairo muRed Dot Mubairo: Chigadzirwa Dhizaini 2021.
Makorokoto nekubudirira kukuru uku!
Icho chokwadi chekuti wakatora nzvimbo yako mumunda wakasimba wevatori vechikamu chinotaura nezve kunaka kwechigadzirwa chako. Zvino shandura iyi dhizaini kubudirira kuita kutaurirana kubudirira zvakare. Shandisa yedu yekuhwina label kuita izvi. Ichokwadi kune chirevo "Kuhwina ndiko Mavambo”, ndiyo yakanakira kutanga kutaura nyaya yebudiriro yako chigadzirwa.
Nekuburitswa muRed Dot Design Yearbook, mukuratidzira kwedu kwepamhepo uye mharidzo mukuratidzira kwedu, kupihwa kwechigadzirwa chako chakanakisa kuchagashira kuzivikanwa uye kutariswa pasi rose.
2021.4.15-24 GUANGDONG ARCAIR APPLIANCE CO., LTD akapinda 129th On-line Canton Fair, uye achishingairira mukushambadzira kwepamoyo kusimudzira zvigadzirwa zvitsva kune vatengi pasi rese.
Arcair yakaunza akasiyana marudzi ekubika hoods &Induction hobs panguva yekuratidzira mhenyu:
Tags: cooker hood, hood, chimney hood, kicheni hood, kicheni chimuney, Cappa, inopisa, coifas, campanas,Dunstabzugshaube
5. Zvitsuwa zvekubikira zvitsuwa
6. Cabinet series cooker hoods
7. Chivharo chemwenje
8. Integrated extractor ine induction hob
Nguva yekutumira: May-10-2021